XOG CUSUB: Itoobiya oo Qorsheyneysa inay ciidamadeeda kala baxdo Degmo labaad oo muhiim ah | Xaqiiqonews
XOG CUSUB: Itoobiya oo Qorsheyneysa inay ciidamadeeda kala baxdo Degmo labaad oo muhiim ah
Dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay qorsheyneyso inay ciidamadeeda kala baxdo magaaladii labaad, kadib markii ay toddobaadkii hore ciidamadeeda kala baxday degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud.
Wararka laga helayo Gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan degmada Xudur ee xarunta maamulka gobolkaasi ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaq xoog leh oo laga shakiyay.
Saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan Xudur ayaa sheegay inay dareemeen diyaargarow iyo dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn, inkastoo aan xog laga siin waxa ay damacsan yihiin ciidamada Itoobiya.
Dhaqdhaqaaqyada ciidamada Itoobiya ay aa ka socda gobollada Galgaduud, Gedo iyo Bakool, waxaana dowladda dalkaasi ay hore u sheegtay in ciidamada aan ka midka ahayn AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ay dib ula noqoneyso.
Dowladda cusub ee uu hogaamiyo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaan xiriir fiican la lahayn dowladda Itoobiya, waxaana suura gal ah in magaalooyin fara badan ay u gacan galaan xarakada Alshabaab marka ay banneeyaan Itoobiyaanka.